ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – ကိုယ်ပိုင်အမှတ် နှစ် သုည သုည “ရှစ်”
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – ကိုယ်ပိုင်အမှတ် နှစ် သုည သုည “ရှစ်” (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts...
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – ပြင်ပြင် မပြင်ပြင် ၀င်ဝင် မ၀င်ဝင် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No...
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – Who is the terrorist, now? (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၄၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts...
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – ၂၁ရာစုဒိုင်းခင်ခင်နဲ့ ဖျာခင်းကြသူများ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No related...
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး ● ရှေ့သို့ …. (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၅၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး ● လုံခြုံဆုံးနေရာ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး ● ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ကြိုဆိုပါ၏ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး ● မင်းတြားကြီးရဲ့ ဆုတောင်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – ကွီးနဲ့ အတူ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး ● ငါ့လိုနေဟေ့ .. ငါ့လိုနေ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No related...
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – အရုပ်ကြီးများကို မစပါနဲ့ (မိုးမခ) ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – နောက်ကြောင်းမပြန်တဲ့ ဘိနပ်တဖက် (မိုးမခ) ဇွန် ၃၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – ဆန္ဒရှိရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရမယ် (မိုးမခ) မေ ၂၉ ၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – မီး နဲ့ အတူ (မိုးမခ) မေ ၁၉၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No related...
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – ရန်သူစစ် မိတ်ဆွေတု (မိုးမခ) မေ ၁၁၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No related posts.